Tafaverin’ireo Mpikatroka Nomerika Amin’ny Toerany Ny Grani.Ru Sy Ireo Tranonkalam-baovao Hafa Voasivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2015 18:05 GMT
Sary avy amin'i Iain Cuthbertson tao amin'ny Flickr. CC BY-SA 2.0
Nankalaza ny Andro Iraisam-pirenena Hanoherana Ny Sivana Antserasera ireo mpiaro ny zo nomerika tamin'ny alalan'ny fanokafana ireo tranokalam-baovao sivy manerantany, anisan'izany ny sampam-baovao tsy miankina Grani.Ru izay nakatona tao Rosia sy ny Fergananews.com, nakatona tao Kazakhstan, Ozbekistan ary Turkmenistan.
Ao anatin'ny Hetsika Fahafahana Mifanakaiky (Operation Collateral Freedom), nampiasa ny teknikan'ny dindom-pitaratra ireo mpikatroka ahafahana mametraka ny dindon'ireo habaka sivy voasivana ao anatin'ny lohamilin'ireo orinasa goavan'ny aterineto tahaka ny Amazon, Microsoft sy Google mba ahafahana mahita izany ao amin'ireo firenena 11 izay andraràna azy ireo amin'izao fotoana.
Ao amin'ireo firenena 11 izay “Fahavalon'ny Aterineto” ireo, dia hanaisotra ny servisy ankapobe ilain'ireo orinasa an'arivony amin'ny asany ny fanakanana ny lohamilin'ireo orinasa goavan'ny aterineto raha kendrena ny tsy ahafahana miditra amin'ireo didom-pitaratry ny habaka ireo. Lafo dia lafo ihany koa ny fiantraikan'izany ara-toekarena sy ara-politika. Voaaro amin'ny sivana noho izany ireo habaka sivy ireo.
Azo idirana ao amin'ny https://gr1.global.ssl.fastly.net/ ankehitriny ny Grani.ru izay voasakana tao Rosia tamin'ny volana Martsa 2014. Ary azo jerena ao amin'ny https://fg1.global.ssl.fastly.net/ kosa ny Fergananews.com. Azo jerena ao amin'ny pejy habaky ny Collateral Freedom ny lisitra feno misy ireo habaka.
Natsangan'ny Reporters Without Borders niaraka tamin'ny GreatFire, vondrona Shinoa mpikatroka izay efa nahatsangana dindom-pitaratry ny tranonkala tsy mety voasakana ao amin'ny Deutsche Welle, Google ary China Digital Times ny Hetsika Collateral Freedom. Azo hidirana maimaim-poana ao amin'ny aterineto hoan'ireo izay te-hanohitra ny fanakatonana habaka ataon'ny governemanta ny fitaovan'ny GreatFire.
Nilaza ny Reporters Without Borders fa nanofa “bande passante” hoan'ny hetsika didom-pitaratra izy ireo ary nangataka tamin'ireo mpisera aterineto mba hanampy amin'ny fividianana “bande passante” fanampiny rehefa lany ny tahiry voalohany, mba hahaela velona ireo dindon-tranonkala ireo.